Dhaqdhaqaayo ciiidan oo saaka laga dareemayo deegaano ka tirsan gobolka Bay. – The Voice of Northeastern Kenya
Dhaqdhaqaayo ciiidan oo saaka laga dareemayo deegaano ka tirsan gobolka Bay.
Wararka saaka ka imaanaya Degaanka Goofgaduud oo 30 KM dhanka waqooyi kaga beegan magaalada baydhabo ee xarunta Gobolka Bay ayaa sheegaya in halkaasi laga dareemayo dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada Xogga dalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka K/Galbeed,kadib markii maalmo ka hor degaankaasi ay isaga baxeen Ciidamada xogga iyo Kuwa K/galbeed oo fariiso ku lahaa, kadibna ururka Al-shabaab ay gacan ku haynta magaaladaasi si buuxda ula wareegeen.
Wararkii ugu Dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada dowlada ay wadaan dhaq-dhaqaaqyo ay ku doonayaan inay markale dib u qabsadaan gacan ku haynta degaanka Goofgaduud oo dhaca duleedka degmada baydhabo ee Xarunta G/Baay.
Daddaka Degaanka ayaa sheegay inay cabsi ka qabaan ciidanka dowlada iyo al-shabaab dagaal halkaasi ku dhex mara saraakiisha Soomaaliyana waxay sheegeen inuu socdo qorshe dagaal oo ay markale doonayaan inay deegaankaas dib uga saaraan xoogaga Al-shabaab.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed, ayaa dhowr mar oo hore sidaan oo kale waxay uga baxeen deegaanka Goofgaduud, waxaana deegaankaasi la wareegay dagaalamayaasha Al-shabaab, walow iyaguna ay dib u faarujiyaan.
← Diyaarado dagaal oo xalay duqaymo ka gaystay gobolka shabeelada Dhexe.
Dowlada Soomaaliya oo saxiixday qaraarka qaramada Midowe ee xaquuqda dadka Nafada ah. →